Iimveliso zasekhaya zeKoogeek ziyathengiswa eAmazon | Iindaba zeGajethi
Eyona mveliso yaseKhaya yaseKoogeek ethengiswayo kwiAmazon
IKoogeek yenye yezona ntengiso zinkulu zeemveliso zekhaya ezixhumeneyo. Inkampani inokhetho lweemveliso ezikhoyo ezinokwenza ubomi ekhaya bube lula. Kuba banoxanduva lokudibanisa izixhobo, ukuze sikwazi ukubalawula ngendlela elula kakhulu.
Ukongeza, sifumana rhoqo izaphulelo kwiimveliso zebranti kwiAmazon. Esi sesinye sezihlandlo. Kuba sihlangana Ezona mveliso zintle zeKoogeek ezinikezelwa kwivenkile edumileyo. Ithuba elihle ukuba ubucinga ukwenza indlu yakho ibe likhaya elixhumeneyo.
1 I-Koogeek Smart WI-FI Strip 3 plug
2 I-Koogeek Smart Wi-Fi Iplagi
3 Umnyango weKoogeeek / woluvo lwewindows
4 I-Koogeek Smart WiFi ikhokele umtya wokukhanya we-WiFi
5 Ukutshintsha kweKogege Wi-Fi
6 Iifowuni zeBluetooth zedodocool
I-Koogeek Smart WI-FI Strip 3 plug
Siqala ngenye yeemveliso ezaziwa kakhulu zeKoogeek. Sisiqwenga apho sifumana iiplagi ezintathu zizonke. Siyabulela kuyo sinokudibanisa izixhobo ezininzi kuyo ngendlela elula, esiza kuyilawula kude. Oku kusivumela ukuba siyicwangcise okanye siyicime ngalo lonke ixesha. Ukongeza, eli qhekeza liyahambelana nabancedisi abanjengo-Alexa okanye uMncedisi kaGoogle. Into enika amathuba amaninzi.
Sikwanamathuba okuba ukusetyenziswa kwamandla kumtya wamandla. Yintoni enika abasebenzisi ithuba lokulawula ngalo lonke ixesha kwenzeka ntoni kuyo, malunga nokusetyenziswa. Ukuphepha ngale ndlela kukho ukusetyenziswa kwamandla okugqithisileyo ngezixhobo ezichaziweyo.
Kule ntengiso yeemveliso zeKoogeek onako thenga ngexabiso le-41,99 euro. Ukufumana ngeli xabiso, kuya kufuneka usebenzise le khowudi yesaphulelo: i-SRZCP6JU ifumaneka kude kube ngoMatshi 27.
Koogeek Iplagi yeWi-Fi efanelekileyo
Okwesibini siyifumana le plug smart kwiKoogeek. Yenye yezona mveliso zaziwayo nezithengisa kakhulu uphawu namhlanje. Siyabulela kule iplagi sinokulawula ngendlela elula kakhulu isixhobo esixhume kuso. Ke ngoko inokucwangciswa ukuyicima okanye ukuyicima. Oku kunokwenzeka ngenxa yokuba le iplagi inenkxaso yeWiFi, esinika eli thuba.
Ukongeza, ukwenza ukusetyenziswa kwayo kube lula, kunokwenzeka yisebenzise nge-Apple HomeKit kunye ne-Alexa. Ke ukuba unayo nayiphi na kwaba bancedisi ekhayeni lakho, uya kuba nakho ukuyilawula ngemiyalelo yelizwi ngalo lonke ixesha. Ikwasivumela ukuba sibe nolawulo lwexesha lokwenyani lokusetyenziswa kwamandla.
Kule ntengiso yeemveliso zeKoogeek kwiAmazon sinako thenga ngexabiso le-26,99 euro. Ukuba ufuna ukufumana esi saphulelo, kuya kufuneka usebenzise le khowudi yesaphulelo: H5QGOMTQ ifumaneka kude kube ngoMatshi 27.
Ngokufanelekileyo enye yeemveliso zeKoogeek zaziwa kakhulu kubathengi. Le nzwa, esingayisebenzisa kwiminyango okanye kwiifestile, Yenye yezona mveliso ziluncedo kakhulu ekuthi uphawu lube nalo kwikhathalogu yalo. Kuba sinokuyisebenzisa kuzo zonke iintlobo zeemeko. Ingasetyenziswa kokubini kwiminyango ngaphakathi endlwini, ukuze ukukhanya kuvuleke xa ungena okanye ucima xa ushiya. Kwakhona kwiikhabhathi, ukuze ukukhanya kuvulwe kwikhabhinethi.
Nangona sinako Sebenzisa kwakhona njengesixhobo sokhuseleko. Kuba le sensor inokusetyenziswa emnyango okanye efestileni ekhaya. Ke ukuba umntu uzama ukungena endlwini, unokufumana i-alamu kwifowuni, ebonisa le meko. Ke yindlela elungileyo yokukhusela amakhaya ethu. Into eluncedo kakhulu kubasebenzisi ke ngoko.
Kule ntengiso sinokubakho cThenga ipakethi okanye iipakethe ezimbini zoluvo lweKoogeek. Kwimeko yokuthenga ipakethe, ixabiso li-euro ezingama-19,99. Ukuba kuthengiwe ezimbini, ixabiso kwelo tyala ngama-39,99 euros. Kuzo zombini iimeko kunokwenzeka ukuba ufumane isaphulelo usebenzisa le khowudi: HHK8HP3V ifumaneka kude kube ngoMatshi 27.
I-Koogeek Smart WiFi ikhokele umtya wokukhanya we-WiFi
Imveliso elandelayo kuluhlu yenye yezona zinto zithengiswayo. Ngumtya we-LED, onobude beemitha ezi-2. Enkosi ngayo, sinokutshintsha igumbi endlwini yethu ngendlela elula ngokwenene. Kuba sinemibala eyi-1600 ekhoyo Kule strip ye-LED. Ke ngoko, ukuba sibukele imovie, sinokukhetha imibala, kodwa xa sisesidlweni sangokuhlwa, kunokukhethwa eminye.
Eyona nto ilunge kakhulu, ukumiselwa kwayo kunye nokusetyenziswa kwayo kulula ngokwenene. Ke uya kuba nakho ukutshintsha ukukhanya, imibala okanye ubungakanani ngawo onke amaxesha usebenzisa usetyenziso kwifowuni yakho. Ke, yenza le strip ye-LED ilingane ngalo lonke ixesha kwimeko. Indlela elungileyo yokuziqhelanisa nekhaya lakho ngalo lonke ixesha.
Ngexesha lokunyuselwa kwiAmazon zeemveliso zeKoogeek, sinako thenga ngexabiso le-euro ezingama-28,99 kuphela. Ukufikelela kwisaphulelo kufuneka usebenzise le khowudi: MYIVL3AI esinokuyisebenzisa kude kube ngoMatshi 27.
Ukutshintsha kweKogege Wi-Fi
Enye imveliso yodidi kwikhathalogu yaseKoogeek, ekufuneka kukhanyiswe kuyo nakweliphi na igumbi endlwini. Nangona olona loncedo lolu tshintsho lusibonisa kukuba singalayita isibane nangaliphi na ixesha. Ngoba Akukho mfuneko yokuba sikule gumbi kuyo. Okwenza ukuba kube lula ukukhanyisa isibane kumgangatho ophezulu, nangaphambi kokuba sinyuke. Kuyenzeka ukuba uyenze ngaphandle kokubakho ekhaya.
Iplagi inenkxaso yeWiFi, ke oko kuyasivumela oku. Ukongeza, ixhasa zonke iiwizard eziphambili, njenge-Apple HomeKit. Le yinto evumela ukusetyenziswa kokukhululeka ngakumbi ekhaya. Ukusukela ngale ndlela iba yinxalenye yendalo yezixhobo kuyo.
Kule ntengiso yeAmazon yeemveliso zeKoogeek, Siyifumana ngexabiso lama-euro angama-35,99. Isaphulelo sinokufunyanwa kusetyenziswa le khowudi yesaphulelo: GOULU37P iyafumaneka de kube ngoMatshi 27.
Iifowuni zeBluetooth zedodocool
Njengesiqhelo, sigqiba ngemveliso yedodocool konyuselo lwevenkile. Kule meko yintloko engenazingcingo yophawu, Esebenza neBluetooth 5.0. Yimodeli encinci, ke leyo evumela ukusetyenziswa ngokukhululekileyo kwazo ngawo onke amaxesha. Ke ngoko, banokuba lukhetho olufanelekileyo ukuba ufuna ukumamela umculo ngelixa usenza ezemidlalo, kuba zilungele kakuhle endlebeni.
Zihambelana neefowuni ze-iPhone kunye ne-Android. Ke akukho ngxaki xa uzisebenzisa. Ukongeza, banokuzimela kakuhle ekusebenziseni, okusivumela ukuba sifumane okuninzi kuwo onke amaxesha. Sinokuzisebenzisa nakwiifowuni, enkosi kumgangatho wazo wesandi.
Kule nyuso kwiAmazon singathenga ngexabiso lama-euro angama-30,79. Ukwenza oku, kuya kufuneka usebenzise le khowudi yesaphulelo: WV37XKGO.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Amazon » Eyona mveliso yaseKhaya yaseKoogeek ethengiswayo kwiAmazon
Uyisebenzisa kanjani iCloud
I-Stadia, iqonga elitsha likaGoogle lokudlala, liyafika